Bidaar ka soo baxday mataankiisa ayaa kashiftay sirtoodii 20-ka sanno! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Bidaar ka soo baxday mataankiisa ayaa kashiftay sirtoodii 20-ka sanno!
Himilo FM –Dalka Shiinaha mataano wada dhashay oo wadaagayay hal rukhsad oo nuuca gaadiidka ah muddo 20 sanno ah ayaa waxaa qabtay booliiska kaddib markii mid kamid ah uu yeeshay bidaar.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha, labada walaal oo magaca qoyskooda yahay Yan ayaa si wadajir ah u isticmaalayay rukhsadda gaadiidka ilaa iyo sannadkii 2017-dii markii mataanka yar lagala laabtay rukhsadiisa sababo la xiriira maandooriye.
Tani ma noqon caqabad weyn, mataanka yar ayaa bilaabay inuu isticmaalo rukhsadda walaalkii illaa markii danbe rukhsadda midka weyn lagala laabtay sababo lagu sheegay inuu gaariga kaxeeyay isaga oo cabsan.
Nasiib wanaag, Mataanka yar ee Yan ayaa dib u helay rukhsadiisa gaadiidka, sidaa darteed mataanaha ayaa bilaabay inay wada isticmaalaan hal rukhsad.
Waxay noqotay sheeko cajiib ah oo isku soo laabanaysa markasta balse markan waxaa timid caqabad adag taasi oo ah in mid kamid ah labada mataane uu yeeshay bidaar.
Booliiska Shiinaha ee magaalada Jiamusi ayaa tagay guriga mataanaha markii laga shakiyay rukhsadda gaadiidka mid kamid ah.
Mid kamid mataanaha ayaa rukhsadda gaadiidka ku wareejiyay booliiska oo gartay in uu leeyahay walaal mataan la ah oo ay isku egyihiin iyadoo mar danbe caddeyn noqotay bidaarta ka soo baxday mataanka kale.
Previous: Shiinaha: 77 jir aan xiirin timahiisa 54 sanno!
Next: 2-da April- Maalinta caalamiga ee xanuunka Autism-ka
Talyaaniga: Tuugo u cudur daartay shaqaalaha banki ay u dhaceen!
Maksiko: Booliiska oo xeray dameer sameeyay rabshado badan